Indraim-bava | NewsMada
Par Taratra sur 19/12/2019
Mandrovitsihy ny mpitantana ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’izao fitantanana faramparany ny tanàna izao. Potehina sy korontanina ambony ambany ny tanàna. Nahazo alalana hivarotra hatrany amin’ny sisin’araben’ny Fahaleovantena mihitsy ireo mpivarotra mandritra ny iray volana. Lazaina fa “Bazar de Noel” ho an’ny boriborintany voalohany ny hatao amin’izany.
Betsaka ny tsy faly amin’ity resaka “Bazar de Noel” gaboraraka hanomezana vahana ny tsena an-dalambe ity eto Analakely sy ny manodidina, indrindra eny amin’ny araben’ny Fahaleovantena. Mpivarotra 500 mahery ny manatobaka ny entany eny ankoatra ireo efa mivarotra amoron-dalana manamaisatra ny fifamoivoizana eto Analakely.
Vao tsy ela no nahazo fanakianana mivaivay ny kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ny nanaovana tsenabe ny tao anatin’ny lapan’ny Tanàna, izao indray fa io manome vahana ny tsena amoron-dalana io.
Hatramin’ny 10 janoary izao ireo mpivarotra no hanjakazaka amin’ny sisin’araben’ny Fahaleovantena sy ny sisin-dalan’ny lalana Andrianampoinimerina rehetra iny.
Hihamafy, araka izany, ny fitohanan’ny fiara vokatr’io fandraisana fanapahan-kevitra tsy am-piheverana io. Manginy fotsiny ny loto hiparitaka amin’izany tsena iniana hatao sy volena amin’ny toerana tsy tokony hisy azy izany.
Efa dodona ny mponin’Antananarivo hahita ny fiasan’ny ben’ny Tanàna vaovao. Hamerina marina ny hasin’Antananarivo. Hanafaka ny gaboraraka ary hametraka ny rafitra matipaika hampirindra ny fiainan’ny mponina eto an-dRenivohitra.
Nidera ny governora ihany koa ny mponina nandray andraikitra nandroaka ny fako ahafahan’ny vahoaka manao fety ao anatin’ny tanàna madio.
Mbola olana anefa, hatreto, ny fandriampahalemana izay mampikolay ireo mpiantsena amin’ny afitsoky ny mpangarom-paosy sy mpanao sinto-mahery ary ireo mpisoloky. Tokony handraisana fepetra manokana izy ireny ary hofaizina ho hitam-poko hitam-pirenena.